Global Voices teny Malagasy » Fironan-kevitra Vaovao Ny “Hijablogs” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Mey 2018 11:16 GMT 1	 · Mpanoratra Jillian C. York Nandika (fr) i Suzanne Lehn, Lauren RAJAOBELINA
Sokajy: Amerika Avaratra, Etazonia, Kanadà, Norvezy, Fivavahana, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Vehivavy sy Miralenta
Ny «hijablogs»: mbola fomba vaovao maneran-tany indray no nampisafotofoto ny tontolon'ny bilaogy. Manerana ny lafy valon'ny planeta, tapa-kevitra ny hitoraka bilaogy ny momba ny fiainany, ny lamaody, ny fiangaly fiaina, ny traikefa mifandraika amin'ny voaly sy ireo resaka politika ary ny fomba fivavahana mifandraika amin'izany ihany koa ireo vehivavy izay nanapa-kevitra ny hitondra ny hijab ( sarondoha silamo). (Fanamarihan'ny mpandika teny : nadika avy amin'ny teny frantsay ho amin'ny teny Malagasy ity lahatsoratra ity, ary amin'ny teny anglisy ny bilaogy tanisaina ato, ny tontolon'ny bilaogy frantsay dia tsy hita amin'ity lahatsoratra ity)
Mitarika ny hetsika ny Hijablog. Ny vehivavy, izay mitàna ity bilaogy ity sady miaina any Norvezy, dia manoratra ny momba ny rehetra, manomboka amin'ny resaka politika (toy ny adihevitra vao haingana momba ny fampidirana vehivavy mitondra hijab ataon'ny mpitandro filaminana norveziana ) ka hatramin'ny lamaodin'ny fanambadiana silamo any Malezia.  Nataon'ity vehivavy mpitoraka bilaogy ity tao amin'ny lahatsoratra vao haingana ny sarin'ilay  mpamorona didin'akanjo silamo maleziana iray Itang Yunasz :
Mpamorona didin'akanjo izay namorona ny akanjo mampiseho tratra i Itang Yunasz, nanjavona nandritra ny taona maromaro, talohan'ny nipoirany indray miaraka amin'ireo sary voaangona ho an'ireo vehivavy misarona voaly. Naseho tao amin'ny Fetin'ny lamaody islamika farany teo ny famoronany.
“Tongasoa amin'ny diako ao anaty hijab…” : fehezanteny mipetraka eo amin'ny pejy voalohan'ny Muslima Maria, bilaogy kanadiana. Nasehony mazava tsara tao amin'ny lahatsoratra nosoratany farany fa dia iray ny fanapahankevitra hanao Hijab, izay noraisiny efa ho valo volana izao. Manoratra  izy :
Tsy fantatro raha mitovy amin'izany daholo ny vehivavy rehetra, fa heveriko fa hitako ny fototra mahatonga ny hijab ho sarotra ho an'ny ankamaroan'ny vehivavy, isan'izany aho. Rehefa miakanjo hijab ianao, dia tsy misy toerana hafa azonao hiafenana. Tsy azonao hafenina ny fihetsehamponao momba ny tenanao, izay rehetra halanao ao aminao, ny fahatsapanao ny fahabangan'ny maha-ianao anao satria naleonao nandany ny 25 tamin'ny androm-piainanao ho fanorenana fiainana manodidina ny hatsaran-tareny, toy izay nanangana ny maha-ianao anao. Mahatsapa fa ratsy tarehy ianao, na dia tsara kokoa aza ny ankamaroan'ny vehivavy fantatro manao hijab, mihanjahanja eo anatrehanao ny fahatsapanao ny tenanao, ny endrikao, ny fitiavantenanao. Izany no fanamby ho an'izay vehivavy manapaka hevitra hitafy hijab. Voasedra hiaina eto amin'izao tontolo izao izy, tsy miafina ao ambadiky ny bikany, ny fanatsaràna ny tarehiny, ny volony, ny akanjony. Tsy misy mihitsy manodina ny toetrany, ny teny lazainy, ireo hevitra ambarany… ary izay no tena mampahatahotra. Mampahatahotra ny mivoaka amin'ny tontolo iray manditsoka ny maso, manipy ny volo any aoriana, manome tsiky, izany no hahazoana fanekena avy hatrany, ho an'ny tontolo iray izay tena hihainoan'ny olona tsara ny zavatra lazainao sy ny fomba ilazanao azy. Mora ny manafina ireo zavatra rehetra izay hitanao fa ratsy aminao any ambadiky ny lamaody, ny fanatsaràna tarehy, ny firavaka sy ny fibango volo. Rehefa mitondra hijab ianao, dia tsy maintsy miatrika ny maha-ianao anao, miaraka fiheveranao ny fahalemenao, ny tsy fahamendrehana amin'ny fifandraisanao amin'ny vatanao, ny fihetsehamponao momba ny tsy fahampian'ny toetranao, na ny fahatsapanao fa tsy mahaliana intsony rehefa tsy mampiasa ny firaisana ara-nofo mba hisintonana ny saina. Rehefa mitodra hijab ianao, dia miatrika ny devoly ao anatinao- izany no tena mafy indrindra
Ilay amerikana mpitoraka bilaogy (avy any New Jersey) Is There Food On My Niqaab? dia nihevitra ny hanaovana tranombarotry ny hijab  ato amin'ity lahatsoratra manaraka ity :
Izaho no miteny izany aminareo, fa atsy ho atsy dia hisy TRANOMBAROTRY NY HIJAB hatraiza hatraiza. Mahazo mankany ireo rahavavy mba horakofana ny hijab-ny nataonà mpamorona didinà hijab raha toa ka tsy maintsy mamonjy fampakarambady na mamonjy ‘aqeeqah’ satria tsy nianatra namatotra hidjab amin'ny fotoana manan-kaja. Eny e, azo atao angamba ny manofa hijab miaraka amin'ny paingotra fanao aminà hijab tena mifanaraka tsara aminy ! Azonao entina mivoaka izany , ary avy eo averinao indray any amin'ilay tranombarotra rehefa voasasa madio tsara tsy misy pentina miandry izay hampiasa azy manaraka.
Hipetraka ery anaty efitra afara ao amin'ilay tranombarotra ireo rahavavy, miandry ny anjarany … mamadibadika gazetiboky momba ny fiangaly hijab, mamoritra ny zoron'ny pejy manaitra azy. Entiny ao anaty kitapo hafa ny fanamiany, mba hitadiavana hijab, fehiloha ary paingotra mifanaraka amin'izany. Dinihin'ilay mpamorona didinà hijab ny rafitra sy ny lokon'ny tavan-dry zareo, avy eo miasa, amin'ny fanaovana sarinà onja, vònam-bolo ary mandamina ny hijab amin'ny alàlan'ny famatorana na amin'ny fanakentronana izany amin'ny fomba mety rehetra. Angamba tsy maintsy hampiasa ny rano atsifotra natokana ho an'ny hijab ry zareo mba hitazonana azy tsy hilatsaka ! Angamba mety hisy ihany koa mpahay hatsaran-tarehy hanampy amin'ny fanatsaràna ny tarehy sy hanome anao niqaab (lamba fanafen-tarehy) ho entina eo am-pivoahana avy natao manjamanja.
Hitako eto sahady … hmm …
Mikasika izany, raha misy IRAY aminareo mangalatra ny hevitro ary manokatra tsena ho an'ny hijab, dia hotakiaKO 50%-n'ny tombony … fara-fahakeliny ! ary tandremo !
HijabiStyle dia bilaogy iray mampiseho ireo karazana fiangaly hijab marobe, ampian'ny safidin-kevitr'ireo vehivavy maro mikasika ny fomba fitafiana azy. Vao navoaka vao haingana tamin'ny aterineto ny lahatsary ato anatin'ity rohy manaraka  ity
Ankoatr'ireo bilaogy anankitelo voatanisa eo ambony eo ireo, dia betsaka ny bilaogy natokana ho an'ny hijab : santionany fotsiny ny Hijab Style , Hijabee , ary Hijabi Couture .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/05/28/119829/
 adihevitra vao haingana momba ny fampidirana vehivavy mitondra hijab ataon'ny mpitandro filaminana norveziana: http://thehijablog.wordpress.com/2009/02/21/thoughts-on-the-current-hijab-use-in-the-police-debate-in-norway/
 lamaodin'ny fanambadiana silamo any Malezia.: http://thehijablog.wordpress.com/2008/12/13/cute-colorful-wedding-gowns/
 nihevitra ny hanaovana tranombarotry ny hijab: http://istherefoodonmyniqaab.blogspot.com/2009/02/hijab-styles.html
 lahatsary ato anatin'ity rohy manaraka: http://www.youtube.com/watch?v=BPdxHYAc9iM&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1
 Hijabi Couture: http://hijabicouture.blogspot.com/